Download iDVD maka Windows 7 / Vista / XP Ọkụ DVD on PC
Bara uru Atụmatụ na iji Inyere Gị Aka Ime Full Jiri nke iDVD
4. iDVD Gburugburu
iDVD bụ Apple si ndabere DVD ọkụ ngwá ọrụ nke-enye gị ka ọkụ QuickTime nkiri na DVD na ala. Ma, n'ihi na ndị nke anyị na-arụ ọrụ a Windows PC, ikekwe Windows 8, 7, Vista, ma ọ bụ XP - enwere a usoro dị ka iDVD na-arụ ọrụ na Windows?
Part 1: The kasị powerfull DVD burner maka Windows
Part 2: Best DVD burner maka Windows
N'ezie, ọtụtụ iDVD uzo ozo maka Windows na-ahụ. Kwesịrị ịdị, anyị na Wondershare nwere ike ikwu DVD Creator maka Windows. Ọ bụ ọbụna mma karịa iDVD na ndị ọzọ dị ike atụmatụ na elu ndakọrịta na niile ewu video formats, tụnyere iDVD si QuickTime-na-mma. DVD Creator-Ahapụ gị mbubata ọ bụla video / foto / music, dezie ha na ọkụ na-DVD na ịnara DVD menu. Download kasị mma iDVD ọzọ maka Windows ugbu a ka nwere free ikpe. N'okpuru ebe a bụ mere i kwesịrị ibudata a iDVD maka Windows ọzọ. Windows 7, Windows Vista, Windows XP, na Windows 2000-n'ụzọ zuru ezu na-akwado, na anyị na-ekwe nkwa Windows 8 na-akwado n'ọdịnihu. Free nweta nkwalite na-nyere maka a ndụ oge.
Ọkụ ọ bụla video ka DVD na Windows 8/7 / Vista / XP / 2000
The iDVD maka Windows-akwado ndị niile na-ewu ewu video formats eji maka ihe ndị ebudatara videos, camcorder videos na iPhone videos, ma na HD ma ọ bụ SD formats, gụnyere MOV, MP4, M4V, AVI, FLV, WMV, 3GP, ASF, MKV, MOD, AVCHD, RMVB, wdg E wezụga na-ere ọkụ video ka DVD, ị nwekwara ike ime ka a ngosi mmịfe nkiri na foto na music. Ọ bụ nile-na-otu ngwọta ịzọpụta gị ntụrụndụ na-echeta na-DVD n'ihi na ogologo oge azọpụta.
iDVD maka Windows ọzọ na a windows-ịke interface; a mma nnọchi ka iDVD.
Dezie video na foto na ala
DVD Creator-Agụnye ihe nile nkịtị video na foto edezi ngwaọrụ-enyere ị na-emetụ gị foto na vidiyo mfe. Ka ihe atụ, i nwere ike ewepụtụ, akuku, bugharia, tinye watermarks, kpatụ video mmetụta, wdg na-ewetara gị video mma na-ekiri na TV. Na-agwa otu akụkọ TV, i nwere ike tinye captions, n'okirikiri, na-eji ire ụtọ ikwu n'ụzọ ime ka gị na DVD fim mma.
Mee ka a ọkachamara na-achọ DVD menu
Nke a iDVD maka Windows na-enye gị 40+ static ma ọ bụ ike DVD menu ndebiri na-eme ka a ọkachamara DVD dị ka azụmahịa DVD. Ọ dị mfe chepụta a ahaziri DVD menu na mfe nzọụkwụ.
Atụmatụ: Olee otú igwu egwu iDVD faịlụ na PC / Windows
Ị nwere ike ọkụ DVD na iDVD na-egwu na-Windows / PC na a DVD ọkpụkpọ software dị ka VLC Media Player (Free) ma ọ bụ PowerDVD (azụmahịa). All DVD discs jiri otu ọkọlọtọ. Ihe ọ bụla omume ị na-eji ọkụ DVD diski, ị nwere ike igwu DVD diski na gị dakọtara n'ụlọ DVD ọkpụkpọ dabere na ebe (NTSC ma ọ bụ PAL ọkọlọtọ). Nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na sistemụ. Ọ bụ yiri ị nwere ike igwu DVD ọkụ na Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000. Ebe ọ bụ na Windows 8 si ndabere mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enye elu DVD akwado, ị nwere ike ịlele ebe a iji na-egwu DVD na Windows 8 were were.
Free download iDVD ọzọ maka Windows (ikpe version):
Olee otú m mbupụ iPhoto ngosi mmịfe Iji iDVD?
Top nrụọrụ ka katalọgụ Your DVD Collections Online
> Resource> DVD> Download iDVD maka Windows 8/7 / Vista / XP Ọkụ DVD on PC